I-Semalt ichaza indlela yokuvikela isayithi lakho kusuka ekuqotheni
I-inthanethi iyisisetshenziswa esikhulu esinamakhono angenamkhawulo. Ngenxa yalokho, i-intanethiplatform inikeza izindlela eziningi lapho imikhiqizo nezinhlangano zingakwazi ukuhlangabezana nezilaleli zabo kanye nomakethe okungenamkhawulo.Abaningi bamabhizinisi bathatha indlela yokuhweba nge-e-commerce ukusetha amawebhusayithi abo kanye namandla kumikhankaso yabo yokumaketha. Kukhona futhiBlogger eziningi ezinamabhulogi amaningi aphumelelayo ku-intanethi. Uma usebenzisa amasayithi e-commerce, ukuphepha kwabo kuyisici esisodwa phakathi kwamanye amaningiudinga ukucabangela.
Uma senza amawebhusayithi, sigxile ekulethwe kwezidingo, ukwaneliseka kwamakhasimende, futhiukukhishwa kwe-UX. Amasu amaningi okumaketha ama siteshi asebenzisa ngokuvamile ahlanganisa izindlela Zokusesha Engine Optimization (SEO) ezifana namagama angukhiyeukusesha nokuxhumanisa. I-potentially a hacker ene-website ayiyona imbono ewela ingqondo yabantu abaningi.
Uma ufunda indlela yokuvimbela ukuhlasela okunamandla, kubalulekile ukufunda ezinyeamasu angavimbela amanye ama-hacks ajwayelekile. U-Nik Chaykovskiy, iMenenja Ephezulu Yempumelelo Yekhasimende i-Semalt ImiSebenzi Yedijithali, inikeza ukunakekelwa kwakho okuvamile kanye nezindlela zokuzigwema:
Lokhu kuhlasela kungabandakanya imilayezo yephutha kanye namafomu okufakela ku-intanethi. Lapho wenza iwebhusayithi,kubalulekile ukwenza izinsimu zegama zingabi nalutho noma zingenalutho. Lesi sici singaphika i-hacker enye imininingwane ebalulekile, engayisebenzisa kuwoukuhlela ukuhlasela kwabo. Kwezinye izimo, imilayezo yephutha idinga ukuba amagama abasebenzisa umsebenzisi. Amanye amaphutha anganikeza abaduni umbono onubungozi besistimu..
Lesi sici senza i-akhawunti ikhiphe ngemuva kokuzama imizamo eminingi yokungena ngemvume.Ukuvumela ukuhlolwa okulinganiselwe kunika i-akhawunti yomsebenzisi yesisulu ezinye izinzuzo zokuphepha phezu kwe-hacker. Ukusebenzisa iphasiwedi ephephile kungabaisilinganiso esibalulekile abantu abangasisebenzisa ukuthuthukisa ukuphepha kwamawebhusayithi abo. Amakhodi we-Captcha angavimbela ukungena okuzenzekelayoingavela kubhu. Baqinisekisa nokuthi umuntu wangempela usebenzisa isayithi, hhayi i-robot.
Kubalulekile ukusebenzisa iphasiwedi ephephile ikakhulukazi kwipaneli yokuphatha yewebhusayithi yakho.Iphasiwedi ephephile ingavimbela iwebhusayithi yakho ekuhlaseleni okulula okujwayelekile. Iphasiwedi efana ne-12345 ayivikelekile futhi ingaholela ekuhlaselweni kwemvelo.Kubalulekile ukusebenzisa ama-generator wephasiwedi ukuza negama lokudlula elihlukile. Kubalulekile ukuqhubeka nokushintsha iphasiwedi yakho. Wenakungathuthukisa ukuphepha kwewebhusayithi yakho ngale ndlela.
Kunezindlela eziningi kakhulu abaduni abangathola ngayo indlela eya kwiwebhusayithi. Ezinye zazoIzindlela ezivame kakhulu lapho abaduni baqeda khona i-website kufaka iSQL Injection kanye ne-Cross Site Scripting. Kubalulekileukuthuthukisa ukuphepha kwewebhusayithi yakho kanye nokwamakhasimende akho ngokusebenzisa izindlela zokuklama ezitholakala kuqondiswa ngenhla.Ungakwazi ukuthuthukisa indlela i-website esebenza ngayo nokuvimbela ithuba le-hacker eliphumelelayo ekuhlaseleni iwebhusayithi.Ukuphepha kokusetshenziswa kwe-intanethi kwewebhusayithi yakho kusezandleni zomphathi. Abaqaphi bangase futhi babambe ulwazi olubalulekile lwamakhasimendeezifana namakhadi esikweletu. Kubalulekile ukucabangela lesi sici uma udala amawebhusayithi.